DAAWO XOG XASAASI AH:Eritrea iyo Itoobiya Oo Heshiiyay & Somaliland Iyo Somalia Oo la isku Dirayo” | Afrikada
DAAWO XOG XASAASI AH:Eritrea iyo Itoobiya Oo Heshiiyay & Somaliland Iyo Somalia Oo la isku Dirayo”
Afrikada, Addis Ababa: Eritrea ayaa sanadkii 1993-dii ka goosatay kuna dhawaaqday in ay xornimadeeda ka qaadatay Itoobiya, isla xilligaasi oo labada dal ay isku qabsadeen lahaanshaha degmada Badhame ee xuduudka 2-da dal kaasoo markii dambe sababay dagaalkii 1998-kii 2-dal digada iska dhigee socdayna ku dhowaad 2 sano. Waxaa dagaalkani lagu tilmaamay mid ka mid ah xarbiyadii ugu jaa’ifada badnaa qaaradan Afrika.
Waxaa dhashay Dareen cusub oo la doonayo in Soomaaliya la isku dhufto, iyadoo la hurinayo colaado cusub kuwaasi oo si tartiib tartiib ah la doonayo in TUKARAQ ay noqoto BADAME-da cusub.
Inkastoo Soomaalidu daalan tahay hadana weli Koonfurtu aysan rabin in ay tooos isugu dhacaan Waqooyiga hadana Weli Somaliland iyo P/land ma laha caqli iyo Darren ay colaadaha Ku joojiyaan.
Waxaa la yaab leh in dadka colaadaha hurinaya ay ugu horeeyaan Imaaraadka Carabta oo xulufo la ah Eritrea, Ethiopia, Somaliland, iyo xitaa Puntland tani oo Amiiradoodu maalinba degmo geynayaan lacag iyo hub. Waxa la duminayo waa horumarka ka soon bidhaamay Muqdisho isagoo Imaaraadku 4-ta dhinac ka degay awoodaha at maamulaan Farmaajo iyo Kheyre. Baabuurtii uu safiirkii Imaaraadku ugu deeqay Puntland waa laga gaarey dantii laga lahaa oo aheyd in ay mar uun dagaal sokeeye isu daba kacaan.
READ MORE: DHAGEYSO: M/Weyne Xaaf Oo Ku Baaqay In Ciidamo Xoog badan ay Sameystaan Hogaamiye goboleedyada?
In xulufada Sacuudigu sidaan oo dhan ugu jawaabaan dowladnimada Soomaaliya waa mid muddo soon jiitameysay Lana Tusinayo Turkiga iyo Qatar in aysan waxba ka tari karin kaartada hareeraynta lagu hayo Villa Somalia.
Dhanka Ra’iisul wasaaraha itoobiya Abiy Ahmed ayaa isagu dhibkii iska xaliyey waxaana uu sameeyay isbedello uu ku guuleystay si uu Eritrea ugu qanciyo in ay tahay mid aan weligeed gooni u taagnaan karin kana maarmin nabad. Ahmed keligiis fekerka ma waana la garab istaagay.
Abiy Ahmed ayaa Eritrea u sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay diyaaradda Ethiopian Airlines u bilaabi doonto duulimaadyadii dalka Eritrea oo ay ka faa’iideysan doonaan shucuubta labada dal.
Dhinaca P/land iyo S/land waxaa maalgelin Ku socotaa in dhanka meediyaha si fiican looga shido colaadaha iyadoo xitaa ciidammadii tababarka u qaatay dowladnimada mar bore la tubay jiidaha dagaalka gobolka Sool.
Walow la ogyahay in dadka degaanku yihiin kuwo tabar daran oo maati ah hadana si loo huriyo dagaalka waxaa degaano msaafo fog jira lava dalbayaa ciidammadii bulshada u adeegayey oo ku hubeysan hubkii sanado badan naloo sheegay in maamul goboleedyada lagu dhisayo hanaankooda dowladnimada.
READ MORE: Madaxweynaha dowladda federaalka oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Mareykanka u fadhin doona Soomaaliya SAWIRRO
Daawo mid ka mid ah iidhehyada telefishinada laga daawanayo si loo caro geliyo ama maamuladu isku adeegsanayaan TV-da bulshada iyadoo la awoodi karo in nabad la wacyi geliyo.